Home Wararka MW Deni “waqtiga oo koobnaa awgeed ayaa dadka hadlaya lagu soo koobay...
MW Deni “waqtiga oo koobnaa awgeed ayaa dadka hadlaya lagu soo koobay madaxdii hore iyo kuwa maanta”
Madaxweynaha cusub ee Puntland ee xalay la caleemasaaray Cabdullahi Saciid Deni ayaa xafladii xalay ka dib ka hadlay warar tuhun ahaa ee la isla dhex marayay magaalada Garowe dhexdeeda taas oo ahayd in loo diiday mucaaradka dowlada Fedaraalka in ay ka hadlaan xafladda caleemasaarka.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in waqtiga oo koobnaa iyo tirada dadka danaynayay in ay ka hadlaan xaflada ay keentay in la soo koobo dadka ka hadlaya xaflada Caleemasaarka.
Waxa uu yiri “dabcan dad badan ayaa rabay in ka hadlaan xaflada oo ay ku jiraan labaatameeyadii aniga ila soo tartantay, wasiiro, xildhibaano iyo mucaaradka Dowlada Fedaraalka waana ay nagu adkeeyd in aan qofkastaa hadalka siino, sidaas darteed ayaana ku soo koobnay madaxdii hore iyo kuwa hadda jooga”. Waxa uu intaas ku daray “waxaan rajaynaa in ay raali ku noqdaan dadka iga soo codsaday in hadal laga siiyo xaflada laakiin ayanu suuragalin in ka hadlaan xafladda, laakiin naxiib wanaag waxa ay joogaan magaaladoodii, sidaas darteed shirarka ay doonaan ha ku qabsadaan Garowe”.
Saciid Deni aya sheegay in ay waxba kama jiraan tahay in dad qaasa loo diiday in ay ka hadlaan xaflada.